Mutungamiri wenyika, VaEmmrson Mnangagwa
Izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya veguta reHarare, VaHerbert Gomba pamwe nevanga vari meya VaJacob Mafume, avo vakambomiswawo basa svondo rino negurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo vachipomerwa zvakare kuita zvehuwori.
Vamwe vashandi vepamusoro pamwe nemakanzura mazhinji eguta iri vakasungwawo vachipomerwa mhosva dzehuwori dzinosanganisira kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo.
Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vakazivisa mumashoko avo epagoredzva kuti hurumende yavo haisi kuzoneta muhondo yayo yekurwisana nehuwori.
Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance VaSesil Zvidzai, vanoti huwori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari mu Local Government Board, kwete kunhengo dzeMDC Alliance.
VaZvidzai vanoti hurumende yaVaMnangagwa inofanirwa kuzoburitsa zvainenge yawana mukuferefeta kwairi kuita mafambisirwo ebasa nekanzuru, vachiti izvi ndizvo zvicharatidza kuti makanzuru eri pasi pebato ravo haana huwori.
Vanoti sebato, MDC Alliance haisekekeri huwori, vachiti vane ruzivo rwekuti zvose zviri kuitwa nehurumende inzira yekuda kupinza nayo komisheni yeZanu PF kuti itungamire guta reHarare.